XLR5Pin Male Female Plug Audio Microphone Cable Connector Audio Socket ဖြစ်သည်
Audio Socket Neutrik XLR Male Female 5-Pin Audio Cable Connector ဖြစ်သည်။ Lianzhan XLR Audio NC5FX NC5MX Cable Connectors များကို Microphone, Sound Card, Video, Mixer, Power Amplifier, Speaker စသည်ဖြင့်သုံးသည်။ Project Installation, Cinema Hall, Radio, Television နှင့် Stage Sound Lighting တို့တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးချသည်။
●အမျိုးအစား: XLR5Pin Male Female Audio Cable Connector
●အရည်အသွေးမြင့်၊ ခိုင်ခံ့သော၊ သတ္တုဆောက်လုပ်ရေး
●ဤအရာများသည်ခိုင်ခံ့သော diecast ခွံနှင့်အတူကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဒီဇိုင်း၊ ခိုင်ခံ့သောခိုင်ခံ့သောပလတ်စတစ်ထည့်သွင်းထားသောကေဘယ်များအားလုံးကိုခိုင်ခံ့စွာချိတ်ရန်။
●ဤအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး XLR connector သည် DMX, MIC, Microphone, Audio စသည်တို့ကဲ့သို့စိတ်တိုင်းကျကေဘယ်များပြုလုပ်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။
5 Standard5pin configurations များသည် XLR outputs များနှင့်အတူ professional audio equipment များနှင့်လိုက်ဖက်သည်
5 Pin Audio XLR Male Female Cable Connector ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြေရှင်းနည်းများကိုလူများကဖော်ထုတ်ပြီးယုံကြည်ရသောကြောင့် China XLR Chassis Connector အတွက်တိုတောင်းသောအချိန်အတွက်စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ website သို့ သွား၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ? ? သွားကြစို့ !!!
China3Pole XLR Connector အတွက် ၁/၄ လက်မ Stereo Jack ပါသောကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်“ သင့်တင့်သောစျေးနှုန်းများ၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသော၊ ထိရောက်သောထုတ်လုပ်မှုအချိန်နှင့်ကောင်းမွန်သောရောင်းအား ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းများ” ကိုကျွန်ုပ်တို့လေးစားသည်။ အနာဂတ်တွင်အပြန်အလှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်ပိုမိုသောဖောက်သည်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်ကြိုဆိုပါသည်။
ယခင်: Neutrik NC4FX NC4MX XLR Connector အစားထိုး Audio Microphone 4-Pin Male Female Cable Connector
နောက်တစ်ခု: Audio XLR Male to Female 6-Pin Connector NC6FX NC6MX Audio Microphone Cable Connector ဖြစ်သည်
အမျိုးသမီး Chassis Connector
အမျိုးသမီး Xlr Chassis Connector
Audio Female Jack4Pin Headphone Stereo Panel ...
Neutrik Male 3-Pin Mic XLR Panel Mount Audio Am ...